မွေးကင်းစမှ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာ ဘာသာစကားဖွံဖြိုးမှု အဆင့်များ - Lifestyle Myanmar
မွေးကင်းစမှ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာ ဘာသာစကားဖွံဖြိုးမှု အဆင့်များ
ကလေးငယ်တွေရဲ့ အသက် ပထမ ၁နှစ်အတွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အပြောင်းအလဲနှုန်းတွေက တခြားအချိန်တွေထက် ပိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ကလေးတွေတေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် လူမူရေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစမှ ၆နှစ်အရွယ်ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုက ဒီလျှင်မြန်ပြီး လေးနက်သော အပြောင်းအလဲတွေကို ပြသပါတယ်။
ဒီအဆင့်အတွင်း ကလေးတွေမှာ သင်ယူဖို့ သဘာဝဗီဇတစ်ခု ရှိလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုက ဒီဆင့်ကဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အခွင့်အရေးပေးပါတဘ်။ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်က ဒီတိုးတတ်မှုရဲ့ အဓိကပံ့ပိုးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတွေရဲ့ ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။ လသားမှ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ တုပပြောဆိုခြင်းက ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
မွေးကင်းစမှ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်များ
၁။ မွေးကင်းစ မှ ၁၂လအတွင်း
ဒါက ဘာသာစကားကို ကြိုလေ့လာတဲ့ “prelinguistic” အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဟာ စကားလုံးတွေ မသုံးပါဘူး။ဘာသာစကားအတွက် ပြင်ဆင်မှုအဆင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဟာ လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေဆဲပါ။ သူဟာ ဗိုက်ဆာနေရင် (သို့) အေးနေရင် (သို့) အနှီးလဲပေးဖို့ လိုအပ်ရင် ငိုပါတယ်။ လူမှုရေးအရ ပြုံးပြပြီး လူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်ပေးမှုကို လိုချင်ရင် အော်ဟစ်တာတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငိုသံတွေနဲ့ အော်သံတွေမှာ ခြားနားမှု အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဗိုက်ဆာလို့ ငိုတာလား၊ အေးလို့ ငိုတာလားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုချင်းစီကို မေမေတို့ကသာ နားလည်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင် ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ vocal chord အသံကြိုးကို စစ်ဆေးကြပါတယ်။ သရသံနှင့် အချို့သော ဗျည်းအသံထွက်တွေကို သင်ယူဖို့ ဝူးဝူးဝါးဝါးဖြင့် အသံထွက်တတ်ကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ma ၊ pa ဆိုပြီး တစ်လုံးပဲပြောနိုင်ရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ မေမေ၊ ဖေဖေဆိုပြီး ပြောနိုင်လာပါတယ်။
တိုးတတ်မှုက တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆက်လက်တိုးတတ်လာပါတယ်၊ ဒီအချိန်ကာလကုန်ဆုံးချိန်မှာ ကလေးငယ်ဟာ သူ့နာမည်နှင့် သူ့အကြားမှာ ဆက်နွယ်မှုရှိတာကို နားလည်လာပါတယ်။ ရိုးရှင်းသော စကားလုံးတွေ သုံးပေးပါ။ အရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေကို သူကောင်းစွာ နားလည်ပါတယ်။ “မေမေ့ကို ပေး”။ “ယူလိုက်” စတဲ့စကားလုံးတွေက များသောအားဖြင့် ကလေးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ၁၂ လမှ ၂၄ လသား
ဒီအချိန်မှာ ကလေးဟာ အမိန့်တွေ ၊ လိုက်လျောတာတွေကို နားလည်လာပါပြီ၊ သူဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေတကို သုံးလာနိုင်ပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းဟာ အရာဝတ္တုများကို ရည်ညွှန်းသော နာမ်များဖြစ်ပါတယ်။
သူလိုချင်တဲ့ဟာကို” ဒါ”လို့လက်ညှိုးထိုးပြတတ်လာပြီး သူမလုပ်ချင်တဲ့အရာ/မလိုချင်တဲ့အရာဆို “ဘူး”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ သူတို့ဟာ နာမ်နှင့် တြိယာ စကားလုံး ၂လုံးကို ပေါင်းစပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မေမေ နို့၊ ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေနှင့်အတူ အမူအရာတွေပါ လိုက်ပါလာပါတယ်။
တိုးတတ်လာတာနှင့်အမျှ ရိုးရှင်းတဲ့ သီချင်းအချို့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဆိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်ကာလကုန်ဆုံးချိန်မှာ ဝေါဟာရနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားတဲ့ ကလေးတွေရှိပါတယ်။၊ ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်က သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေဆီကနေ ရရှိတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် များစွာ မူတည်ပါတယ်။
၃။ အသက် ၂နှစ်မှ ၆နှစ်
ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုက ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင် သူဟာ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ခြင်းနှင့်အတူ ၂နှစ်အရွယ်သို့ ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူလိုချင်တာတွေကို အတိအကျ ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။
ဗျည်းအက္ခရာအုပ်စု အသံထွက်မှာ ပြဿနာအချို့ရှိနေသေးသော်လည်း ဒီပြဿနာက လေ့ကျင့်မှုနှင့်အတူ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ရှိနေပါက အထူးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အသက် ၄နှစ်အရွယ်မှာ အခြေခံဘာသာစကားဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ကလေးတွေဟာ စကားလုံးတွေကို ရိုးရိုးစာကြောင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပြောဆိုပုံများက တဖြည်းဖြည်း ပိုရှုပ်ထွေးလာသလို ပိုပြီး စနစ်တကျ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ စာအုပ်တွေနဲ့ စတင်ထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ စာအရေးအသားကို စတင်စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်။ မေမေနဲ့ ဖေဖေ ကဲ့သို့သော သူ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော စကားလုံးတွေအပြင် သူ့နာမည်အစ အက္ခရာတွေကို သင်ယူတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ချဉ်းကပ်ပါ။ သူဟာ စာတတ်မြောက်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အစကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးဟာ သူ့လက်ထဲမှာ ပုံပြင်စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိနေရင်” ဒါ ဘာကိုပြောတာလဲ”လို့ မကြာခဏ မေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီမေးခွန်းက ပုံပြင်တွေကို စကားလုံးများဖြင့် ပြုလုပ်တာကို သူအသိအမှတ်ပြုကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
မွေးကင်းစမှ အသက် ၆နှစ်ကလေးတွေမှာ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်မလဲ?
ဘာသာစကားရဲ့ အသုံးပြုမှုနှင့် နားလည်ခြင်းကို မသိစိတ်ဖြင့် သင်ယူဖို့ သင့်ကလေးအား ကူညီခြင်းက ရိုးရှင်းသော နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှတဆင့် အောင်မြင်နိုင်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
သူလိုချင်တဲ့အရာနှင့် သူခံစားနေရတဲ့ အရာတွေကို ပြောဖို့ ဘာသာစကားကို သုံးခိုင်းပါ။
သင့်ဆီက သူတစ်ခုခုတောင်းဆိုတဲ့အခါ အမူအရာမပါဘဲ စကားလုံးတွေဖြင့် တုံ့ပြန်ပါ။
သီချင်းတွေ၊ ကဗျာနှင့် ရမ်သမ်တွေကို သင်ပေးပါ။
ကလေးဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးမပြုဘဲ ကလေးကို စကားပြောပေးပါ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကို လျှော့မတွက်ဖို့နှင့် သူပြောတဲ့ အရာထက်ပိုနားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ။ ၂၄= ၇၆ ၇၆= ၂၃၂ ၂၃၂= ၇၀၀ ၇၀၀= ၂၁၀၄ ၂၁၀၄= ? (A) ၇၀၀။ (B) ၃၀၈၀။ (C) ၆၁၃၄ (D)...
မိန်းကလေးတွေက ဘာကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေထက် ပိုပြီးအငိုသန်ကြတာလဲ ?
လောကကြီးမှာ အငိုသန်တဲ့လူနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေပါပဲ။ မွေးကင်းစကလေးတွေထဲမှာတောင် မိန်းကလေးတွေပါဝင်နေတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငိုအသန်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အကြိမ်ပေါင်း (၄,၆၈၀) အထိ ငိုကြွေးကြပြီး ဒါဟာ အမျိုးသားတွေ...